शिल्पा र राज कुन्द्राविरुद्ध मुद्दा दर्ता, नयाँ मामिला के हो ?
बलिउड नायिका शिल्पा शेट्टी तथा उनका श्रीमान् राज कुन्द्राविरुद्ध मुम्बईको बान्द्रा पुलिस स्टेशनमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आइतवार, कार्तिक २८, २०७८ १:३५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। बलिउड नायिका शिल्पा शेट्टी तथा उनका श्रीमान् राज कुन्द्राविरुद्ध मुम्बईको बान्द्रा पुलिस स्टेशनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नितिन बराई नामका व्यक्तिले शिल्पा र राजले सन् २०१४ देखि हालसम्म स्पा र जिम फ्रेन्चाइजी बाँड्ने नाममा थुप्रै पटक धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
नितिनले यो मामिलामा काशिफ खान, दर्शित शाह र उनका केही साथीलाई पनि आरोपी बनाएका छन् । यद्यपि, काशिफ र दर्शित को हुन् र शिल्पा–राजको कम्पनीमा उनीहरुको के भूमिका छ त्यसबारे पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
१.५ करोड भारु लगानी गराएर धोका दिएको आरोपः
नितिनका अनुसार उनले पुणेको कोरेगाँवमा शिल्पा र राजको कम्पनी ‘मेसर्स एसएफएल प्राइभेट कम्पनी’ को जिम र स्पाको फ्रेन्चाइजी खोलेका थिए । आरोपीले उनलाई १ करोड ५९ लाख २७ हजार भारु लगानी गर्न लगाए र ती पैसा नीजि प्रयोग गरेको आरोप लगाए । नितिनका अनुसार उनले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि आरोपीले धम्काउन सुरु गरे ।
शिल्पा र राजसँग छिट्टै सोधपुछ हुने सम्भावनाः
नितिनको ऊजुरीपश्चात् बान्द्रा प्रहरीले शिल्पा शेट्टी, राज कुन्द्रासमेत अन्य आरोपीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले यो मामिलामा छिट्टै आरोपीसँग सोधपुछ गर्न सक्छ । राज कुन्द्रा र शिल्पाको पक्ष थाहा पाएपछि प्रहरीले छिट्टै उनीसँग सम्पर्क गर्न सक्छ ।
पोर्न केसमा जमानतपछि देखिएका छैनन् राजः
पोर्नोग्राफी मामिलामा राज कुन्द्रा जेलबाट छुटेपछि खासै सार्वजनिक स्थानमा देखिएका छैनन् । उनले १ नोभेम्बरमा आफ्नो ट्वीटर र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट पनि गरेका थिए । पोर्नोग्राफी केसमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रा २ महिनापछि २० सेप्टेम्बरमा बम्बे हाईकोर्टबाट जमानत पाएका थिए ।
बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बिहे गर्दै ! साथीबाट जीवनसाथी बन्दै ।
वलिवूड नायिका काजल अग्रवाल बिहेपछि झनै सुन्दरता बढदै हेरौ केही तस्बिरमा ।
म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु: मुख्यमन्त्री राईले भने
अस्मितालाई उछिन्दै रेवत शीर्षस्थानमा : हेर्नूस् पछिल्लो साता युट्युवमा सर्वाधिक हेरिएका टपटेन नेपाली गीत (सूचीसहित)